प्रचण्ड पुत्र प्रकाश बने महाप्रचण्ड, नेता लोकेन्द्र बिष्टलाई ‘तँ बाहिर जा’ भन्दै धकेले.. – Complete Nepali News Portal
प्रचण्ड पुत्र प्रकाश बने महाप्रचण्ड, नेता लोकेन्द्र बिष्टलाई ‘तँ बाहिर जा’ भन्दै धकेले..
October 23, 2017	2,103 Views
पटक पटक बिवादमा तानिईरहने नाम हो प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहाल । कहिले बहुबिबाह त कहिले नेता कार्यकर्तालाई तथानाम गाली गरेर चर्चामा आउने गर्छन् उनी । केही बर्ष अघि पारस शाह थाईल्याण्डमा बिरामी परेका बेला पारस शाहको निधन भएकोमा हार्दिक श्रद्धञ्जली भन्ने उनको स्टाटसले खुब चर्चा पाएको थियो । त्यस्तै आजभोली उनको अर्को चर्चा छ ।
आफ्नै पार्टी कार्यलय सदस्य लोकेन्द्र बिष्ट मगरलाई बालुवाटारमा प्रचण्ड भेट्न गएका बेला भित्रबाट धकेलेर ‘तँ बाहिर जा’ भनेर धेकेलेरै खेदेको लोकेन्द्र बिष्ट मगरले बताएका छन् । जनयुद्ध तथा आधार ईलाका निर्माण महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका थिए नेता बिष्टले । करिब ४० बर्ष पार्टी र क्रान्तिका लागि लडेका उनलाई प्रचण्ड पुत्रले बालवाटारबाट धकेलेरै बाहिर पठाएको स्वयम् लोकेन्द्र बिष्ट मगरले दियो पोष्ट संगको अन्तरवार्तामा बताएका छन् ।
सोही अनलाईन संगको कुराकानीका क्रममा प्रचण्डपुत्रले तपाईंहरू जस्ता जिम्मेवार नेतामाथि अभद्र व्यवहार गरेको कुनै घटना छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनेको कुरा जस्ताको तस्तैः
‘उनी बाबुका कारण पनि होला अलिकति घमण्डी छन् । चर्को बोल्छन् । एउटा घटना छ– प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका देला उनलाई भेट्न मैले प्रकाशलाई फोन गरेँ, उठेन । सीधै बालुवाटार भेट्न गएँ । प्रकाश आएनन् । भेटघाट दिनेजस्तो अवस्था भएन । म आफैँ अध्यक्षलाई भेट्न कस्सिएँ र अघि बढेँ । प्रकाशले थाहा पाएछन् र बीच बाटोमै बाटो छेक्न आए । मैले भने, ‘म अध्यक्षलाई भेट्न आएको हुँ ।’ चर्को स्वरमा उनले भने, ‘तपाईं तल गएर बस्नुस् । नसोधेरै आउने, फोन नगरी आउने ? मैले भने, ‘कसलाई सोधेर आउने ? फोन गर्दा फोन उठ्छ र तिम्रो ? म अध्यक्षको कार्यालय सदस्य हुँ ।
अध्यक्षलाई भेट्न जाँदा प्रचण्डपुत्रले नै बाटो छेकेर ‘तँ तल जा‘’ भनेपछि कुकुरले पनि त्यस्तो खालको व्यवहार भोग्दैन । कि हामीलाई पार्टीबाट निष्काशित गरिदिनुप¥यो । म त प्रचण्ड भेट्न गएको हुँ । सुसाइडर वा आत्मघाती दस्ता बनेर म प्रचण्डलाई सिध्याउन गएको त होइन नि ? यो विषयमा कार्यालय बैठकमा सबैले आलोचना गरे । मैले भने, ‘कमरेड अध्यक्ष, हामी तपाईंलाई समस्या बन्न आउँदैनौँ । समस्या सेयर गर्न आइन्छ ।
तपाईंको समस्या हल गर्ने गरी आइन्छ । यदि हामी आउँदा सेयर गर्ने कुरालाई पनि समस्या मान्नुहुन्छ भने अब आइँदैन ।’ त्यसपछि म कहिल्यै गइनँ । झन्डै नौ महिना भयो, म प्रचण्डलाई भेट्न गएको छैन । मैले अपेक्षा नगरेको कुरा उहाँको छोराबाट भयो । उहाँको छोराले नराम्रो गरेपछि मलाई जान मन लागेन । त्यसले मलाई दुःख लाग्यो । त्यसको दोष म तलको मान्छेलाई होइन, अध्यक्षलाई दिन्छु । अध्यक्षले मिलाउनुपथ्र्यो ।
उहाँले जोसुकै सहयोगी राखेहुन्छ तर, त्यसले पार्टीलाई र उहाँलाई सजिलो गर्नुपर्छ । उहाँको सचिवालयमा भएका मान्छे प्रचण्ड होइनन्, प्रचण्डका सहयोगी हुन् । तर, उनी महाप्रचण्ड हुनु हुँदैन । प्रचण्डका वरिपरि बस्ने मान्छे महाप्रचण्ड भएपछि प्रचण्डलाई समस्या परेको हो । त्यो कुरा मिलाउने प्रचण्डले नै हो । म गरेर खाने मान्छे हुँ । पछि म खेतीपाती गर्न लागेँ । छोरा प्रकाशबाट धेरै मान्छे पीडित छन् । उनले गर्ने व्यवहार राम्रो छैन । अरुको पनि गुनासा छन् । फोन उठ्दैन । त्यहाँ गएका मान्छेलाई रेस्पोन्स हुँदैन । प्रचण्ड हाम्रो नेता हो तर, प्रकाश नेता होइन कार्यकर्ता हो । प्रचण्डको छोरो त हो तर, पार्टीको कोणबाट हेर्दा कार्यकर्ता हो । प्रकाशले त्यहाँ जाने मान्छेलाई जो ‘बिहेब’ गर्छन्, त्यसले प्रचण्डलाई असर गर्छ । पार्टीलाई असर गर्छ ।’ (इमान्दारमिडिया बाट)
केपी, प्रचण्ड र रामचन्द्र एउटै मञ्चमा उभिदा रामचन्द्र किन जंगिए ? (भिडियो)